Somalimirror.net – Page 2 – Warar Ku Salaysan Xaqiiq iyo Xuuraansi
Posted on August 26, 2021 August 26, 2021 By Somalimirror No Comments on Al-Shabaab oo soo bandhigay hubkii iyo gaadiidkii ay ku qabsadeen weerarkii deegaanka Cammaara [Sawirro].
Wararka Caalamka “Al-Shabaab oo soo bandhigay hubkii iyo gaadiidkii ay ku qabsadeen weerarkii deegaanka Cammaara [Sawirro].” »
Sarkaal sare oo kamid ahaa ciidamada dowlada ee ku sugan degaanka Camaara ayaa dhaawac ka soo gaaray u dhintay.
Posted on August 24, 2021 August 24, 2021 By Somalimirror No Comments on Sarkaal sare oo kamid ahaa ciidamada dowlada ee ku sugan degaanka Camaara ayaa dhaawac ka soo gaaray u dhintay.
Sarkaalkan oo lagu magacaabo Axmed Cabdi Maceey ayay wararku sheegayaan inuu u geeriyooday dhaawac soo gaaray markii argagixisada ay weerar ku qaadeen magaaladaas. Saraakiil badan ayaa jiraan la soco
War cusub: dagaalyanno Islaami ah oo dagaal ku qabsaday Cammaara iyo Bacaadweyne
Posted on August 24, 2021 August 24, 2021 By Somalimirror No Comments on War cusub: dagaalyanno Islaami ah oo dagaal ku qabsaday Cammaara iyo Bacaadweyne
Kadib weerar kedis ah oo saaka aroortii hore ay xoogag islaami ah ku qaadeen laba saldhig oo kuyaal Koonfurta Mudug ayay qabsadeen laba deegaan oo istiraatiiji ah. Sida ay wararku sheegayaan xoogaga Al Shabaab ayaa laba weeraro ku qaaday saldhigyo kuyaal deegaanka Camaara waxaana jira khasaara lixaad leh. Goobjoogayaal ku sugan Mudug ayaa sheegay in…
Wararka Caalamka “War cusub: dagaalyanno Islaami ah oo dagaal ku qabsaday Cammaara iyo Bacaadweyne” »
Taliban oo xaqiijisay in ay Tadbiiqinayso Shareecada Islaamka.
Posted on August 23, 2021 August 24, 2021 By Somalimirror No Comments on Taliban oo xaqiijisay in ay Tadbiiqinayso Shareecada Islaamka.
Indhaha ayaa lagu wada hayaa dowladda cusub ee ka dhismi doonto wadanka Afghanistan 20 sano kadib markii ay Mareykanku duullaan gardarra ah ku qaadeen wadankaasi. Dowladaha reergalbeedka oo ay ugu horreeyaan kuwa Yurub ayaa walaac ballaaran ka muujiyay dowladda Islaamiga ah ee ay soo dhisi doonto Taliban. Ururka Midowga Yurub ayaa warbixin…
Wararka Caalamka “Taliban oo xaqiijisay in ay Tadbiiqinayso Shareecada Islaamka.” »
Weerarro Saraakiil Lagu Dilay Oo Ka Dhacay Magaalada Muqdisho.
Posted on August 22, 2021 August 24, 2021 By Somalimirror No Comments on Weerarro Saraakiil Lagu Dilay Oo Ka Dhacay Magaalada Muqdisho.
Magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya ayaa waxaa maanta ka dhacay howlgallo kala duwan oo lagu dilay saraakiil iyo askar ka tirsan DF.
Rag hubeysan oo ka tirsan Xarakda Mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa howlgal gaar ah oo ay ka fuliyeen duleedka magaalada Muqdisho waxay ku dileen sarkaal iyo askari ka tirsanaa ciidamada dowladda Federalka.
Weerarka oo ahaa mid qorshaysan islamarkaana si weyn loo soo agaasimay ayaa si gaar ah wuxuu kaga dhacay deegaanka Tabeelaha Sheekh Ibraahim gaar ahaan dhanka xigta degmada Dayniile ee magaalada Muqdisho.
Sarkaalka iyo askariga la qaarijiyay oo ka wada tirsanaa ciidamada nabadsugidda ee dowladda Soomaaliya ayaa waxaa lagu kala magaciibi jiray Qooreey iyo Buulle.
Dhanka kale ciidamada xarakada Mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa howlgal ay ka fuliyeen magaalada Muqdisho waxay ku dileen sarkaal ka tirsan Guddiga Doorashada ee Baarlamaanka Soomaaliya.
Xassan Maxamed Cilmi oo aha xubin ka tirsan Guddiga Doorashada ayaa wuxuu dilkiisa ka dhacay qeybo kamid ah degmada Dayniile ee gobalka Banaadir.
Weerardaan ayaa ku soo beegmaya xili xalay ciidamo ka tisan Shabaabul Mujaahidiin ay weerar fool ka fool ah ku qaadeen fariisin ay askar ka tirsan ciidanka nabadsugidda ku leeyihiin xaafadda Daalo ee degmada Howlwadaag, kaas oo khasaare lagu gaarsiiyay askartii ku sugneyd goobta la weeraray.
Wararka Caalamka “Weerarro Saraakiil Lagu Dilay Oo Ka Dhacay Magaalada Muqdisho.” »
Ciidamo lagu qarxiyay Jannaale iyo weerar ka dhacay Waajid
Posted on August 21, 2021 August 21, 2021 By Somalimirror No Comments on Ciidamo lagu qarxiyay Jannaale iyo weerar ka dhacay Waajid
Ciidamada shabaabul Mujaahidiin waxay saacadihii lasoo dhaafay qarax culus la eegteen maleeshiyaad murtadiin ah oo ku sugnaa xerada ciidamada dowladda ay ka samaysteen degmada Jannaale ee wilaayada Sh/hoose.
Ilo wareedyo lagu kalsoon yahay waxay xaqiijiyeen in qaraxa oo ahaa mid lagu diyaariyay gudaha xerada murtadiinta ee Jannaale ay mar qura la kacday ciidamo ka tirsan dowladda federaalka.
Xogaha muhiimka ee soo baxaya waxay sheegayaan in qaraxaas ay ku dhinteen 2 askari oo murtadiin ah iyo dhaawaca 3 kale kuwaas oo dhammaantood ku sugnaa gudaha xerada uu qaraxu ka dhacay ee degmada Jannaale.
Dhanka kale Wararka inaga soo gaarayo wilaayada Bay iyo Bakool waxay sheegayaan in ciidamada shabaabul Mujaahidiin ay dagaal culus ku qaadeen saldhigga ciidamada xabashida Itoobiya ay ka samaysteen degmada Waajid ee wilaayada Bay iyo Bakool.
Deryanka madaafiicda iyo jabaqda rassaasta dagaalka waxaa si wayn looga maqlayay xaafadaha degmada Waajid waxaana lasoo wariyay in dagaalkaas khasaare culus lagu gaarsiiyay ciidamada xabashida.
Wararka Caalamka “Ciidamo lagu qarxiyay Jannaale iyo weerar ka dhacay Waajid” »
Rooble iyo madaxda maamul goboleedyada oo ‘Beesha Caalamka’ dhaqaale weydiisanaya. #Somalia
Posted on August 21, 2021 By Somalimirror No Comments on Rooble iyo madaxda maamul goboleedyada oo ‘Beesha Caalamka’ dhaqaale weydiisanaya. #Somalia
Dugsiga Abaarso ayaa laga hirgeliyey 2009-kii galbeedka magaalada Hargeysa, dugsiga ayaa markii ugu horraysay ahaa dugsi sare oo keliya( Secondary School) markii dambe se yeeshay qayb dhexe iyo jaamacad. Aas aasaha dugsigu waa nin mareykan ah oo layidhaa Jonathan Star. Haddaba markii dugsigaas la aas aasey illaa maanta waxa ka qalin jabiyey ardey badan…
Wararka Caalamka “Rooble iyo madaxda maamul goboleedyada oo ‘Beesha Caalamka’ dhaqaale weydiisanaya. #Somalia” »
CNN ayaa wuxu leeyahay Afghanistan waxa laga helaa nooc macdinta dhulka ah oo naadir ah,
Posted on August 21, 2021 August 21, 2021 By Somalimirror No Comments on CNN ayaa wuxu leeyahay Afghanistan waxa laga helaa nooc macdinta dhulka ah oo naadir ah,
Meelo kale oo adduunka ahna aan laga helin Macdintaas oo ah mid aad muhiim ah, lagayaabee in ayba tahay midda ugu weyn kaydka adduunka ee macdinta Lithium, aad ayey muhim u tahay, lkn tirada laga helo adduunka ayaa aad u yar Waxayna muhim u tahay Jaajarada Bateriyada iyo Technologyada kale ee muhimka u ah latacaalidda…
Wararka Caalamka “CNN ayaa wuxu leeyahay Afghanistan waxa laga helaa nooc macdinta dhulka ah oo naadir ah,” »
wax u eg dhacdadii Afghanistan miyaa Soomaaliya laga filayaa?.
Posted on August 19, 2021 By Somalimirror No Comments on wax u eg dhacdadii Afghanistan miyaa Soomaaliya laga filayaa?.
Muqdisho waxaa ku sugan wafdi ka socda Guddiga ammaanka iyo nabad gelyada Ururka Midowga Afrika waxay madaxda dowladda Farmaajo usoo bandhigayaan qorshahooda labixitaanka ciidankooda.
Shirar aan loo kala kicin ayaa shalay illaa iyo xalay xerada Xalane uga socda madaxda wafdiga iyo xubno uu kamid yahay wasiirka gaashaandhigga.
Saraakiisha ka socda Ururka midowga afrika ayaa dowladda Farmaajo ucaddeynaya in dhowaan ay kumanaan askari AMISOM ah dalka ka saari doonaan.
Bishii May ee lasoo dhaafay ciidamada Burundi oo go’aansaday in ay isaga baxaan gobolka sh/dhexe ayaa waayay ciidamo soomaali ah oo bedela sidaas ayayna bixitaankoodi dib ugu dhigeen sida lagasoo xigtay sarkaal Burundeys ah.
Wararka Caalamka “wax u eg dhacdadii Afghanistan miyaa Soomaaliya laga filayaa?.” »
Posted on August 18, 2021 August 18, 2021 By Somalimirror No Comments on
Copyright © 2021 Somalimirror.net .